Powder YK-11 Raw (431579-34-9) Mpanamboatra - Chemical Phcoker
Ny vovo YK-11 dia an'ny vondrona modulator receptor androgen voafantina (vovo YK11). Amin'ny ankapobeny, izay ataon'ny YK11 dia mifantina ……
YK11, fantatra ihany koa amin'ny hoe Myostine dia raisina ho iray amin'ireo matavy YK11 matanjaka indrindra amin'ny tsena. Izy io dia mpitsabo moderine androgen receptor androgen. Ny zava-mahadomelina dia manana hetsika anabolika ao amin'ny myoblasts C2C12 ary mampiseho fahaizana betsaka kokoa noho ny dihydrotestosterone (DHT) amin'io lafiny io. YK11 koa dia inhibitor Myostatin. izy ireo dia afaka manampy anao hahazo mecomotra ary tsy ho matavy.
Drug Class YK11 vovoka
Mpampiasa marobe no mihevitra fa ny YK11 no fanalahidy hamaha ny tanjaky ny vatana sy ny fahazoana tratran'ny hozatra haingana miaraka amin'ny fiantraikany kely. Voalaza ihany koa fa ny YK11 dia mahavita mampihena ny fiasa myostatin, fanaovana azy ho miandrona myostatin. Ny YK-11 dia azo antoka fa iray amin'ireo matanjaka indrindra. Tsy azonao atao ny mampitaha ny YK amin'ny LGD-4033 na vokatra hafa noho ny hamafiny.
Na dia izany aza, na dia ny matavy YK-11 aza dia matanjaka tsara fa tadidio fa vitsy ny fandinihana natao tamin'io famokarana io. Io no antony lehibe indrindra toa ny ankamaroan'ny olona toa mandeha miaraka amin'ny hafa toy ny Ostamuscle, RAD-140 na GW-501516.
Ny YK11 dia mahazo tombony amin'ny bodybuilders noho ny fahaizany manangana hozatra haingana miaraka amin'ny fiantraikany kely.
Mampitombo ny haben'ny ratra
Ny YK11 dia mahavita manaitra ny fitomboan'ny hozatra.
◆ Manamafy Orina
Ny hormonina firaisana dia ilaina amin'ny fitazonana ny taolana matanjaka sy salama. Ny porofo azo alaina dia mampiseho fa ny vovony YK11 dia mety hampitombo ny tanjaky ny taolana amin'ny alàlan'ny mamatotra ny tenany amin'ny receptor androgen.
Ireo bodybuilders izay nampiasa vovony raw YK11 dia nilaza fa ny fisotroana azy amin'ny dosage 10 ka hatramin'ny 15 mg isan'andro dia miasa ho azy ireo fotsiny. Ny hafa kosa dia nitatitra ny fiantraikany tsara amin'ny 5 mg isan'andro. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manodikodina izany mandritra ny 4 ka hatramin'ny 8 herinandro.
Vokatry ny vovony Raw YK-11 (431579-34-9)